Man City oo Man United nus darsin goolal ah ku karbaashtey (SAWIRO+VIDEO) – SBC
Man City oo Man United nus darsin goolal ah ku karbaashtey (SAWIRO+VIDEO)
Kooxda Manchester United ee haysata horyaalka English Premier League ayaa maanta gurigeeda Old Trafford waxaa ka qabsatey wacdarihii ugu xumaa taariikhda ee soo mara kooxda iyo waliba tababare Sir Alex Ferguson ka dib markii nus darsin goolal ah ay dhabarka u saareen kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin Manchester City.
“Tani waxay guuldaradii iyo bahdilkii ugu xumaa ee taariikhda isoo mara” ayuu ku yiri Sir Alex wareysi uu siiyey Telefishinka Sky Sports.
Link-ga hoose ka daawo wacdarihii ka dhacay Old Trafford.
Kulankan labada kooxeed ee Man United & Man City oo uu ka dhaxeeyo xifaaltan dhanka kubada cagta ah ayaa guuldarada Man United ku dhacdey ee waliba gurigeeda kula kulantey waxay meesha ka saartey 18 bilood oo xiriir ah oo kooxda Manchester United garoonkeeda Old Trafford aan lagaga badin, waxay kaloo aheyd guuldaradii ugu xumeyd ee soo marta tan iyo sanadkii 1926-kii.
“Waxay aheyd natiijadii iigu xumeyd taariikhda xitaa ciyaartoy ahaan, uma maleynayo in la igaga badiyey 6-1, waana mid aad iigu adag oo I hortaal, goolka ugu horeeyey wuxuu ahaa mid hoos inoo dhigay, waxaanse aaminsan yahay kaarska cas (Red Card) in uu ahaa kan ciyaarta diley, xitaa intii aynu aheyn 4-1 waxaan wadnay weerar, laakiin waxaan leeyahay waxay aheyd maalin nagu xun” ayuu yiri Sir Alex Ferguson.
Ciyaaryahan Mario Balotelli oo maanta ilaa iyo xaley saxaafada saarnaa ka dib markii uu gubtey gurigiisa magaalada Manchester ka dib markii uu ka shiday shumacyada ama Layrarka dabaaldega loogu tala galay ayaa ku hubsadey shabaqa Man United labada goo lee ugu horeysay lixda goo lee Manchester City maanta ku bahdishay dariskeeda ay is neceb yihiin.
Manchester City waxay guusha ay ka gaartey Manchester United ee guriga Old Trafford ay u aheyd tii ugu horeysay tan iyo bishii February sanadkii 1955 xiligaasi oo 5-0 lagu garaacay Man United.
In lix gool lagaga badiyo Man United waliba gurigeeda taariikhda waxaa ugu dambeysay sanadkii 1930-kii xiligaasi oo Huddersfield ay ku garaacdey 6-0 iyo isla sanadkaasi oo New Castle ku durdurisay 7-4 .
Manchester United waxay ku bilaabatey goolasha nus darisnka ka dib markii iyadoo hal gool lagu leeyahay kaarka cas la siiyey ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee Jonny Evans.
Goolka sadexaad ee Manchester waxaa u saxiixay ciyaaryahanka Sergio Aguero, waxaana afareeyey isla markaana lixeeyey Edin Dzeko oo badal ku soo galay halka goolka shanaad uu dhaliyey kubad qaabeeyaha David Silva.
Halka goo lee madiga ah waxaa u saxiixay Manchester United ciyaaryahanka khadka dhexe Darren Fletcher laakiin waa ay ku adkaatey weeraryahanada Man United in ay xitaa hal gool ku daraan goolkaasi madiga ah.
Sir Alex wuxuu ka hadley sida uu u filayey inay caawin karaan ciyaaryahanada Rio Ferdinand &Patrice Evra oo uu bidayey qibrad waxaana uu yiri
“Waxaan u haystay qibrada aan leenahay gaar ahaan Rio Ferdinand &Patrice Evra inay na caawin karto laakiin sidaasi ma noqon oo aad ayaa naloo weeraray, iyaguna way isdifaacayeen si adag inkastoo aan weerar badan sameynay, maanta waxay aheyd maalin xun”.
Waxaan filayaa inaan dib u soo laaban karno oo soo kaban karo marka la gaaro bisha January, caadiyan inta badan waxaan wadada qabsanaa qaybta labaad ee xili ciyaareedka, taasina waa mida xaaladu noqon doonto, jawaab ayaan ka bixin doonnaa tan su’aali kama taagna, waxay aheyd natiijo wax ku ool ah oo ay tahay inaan ka bixino fal celin waayo qolka labiska waxaa ka jirta bahdil, taasina waxay yeelan doonaa faa’ido” ayuu yiri Sir Alex.
Laakiin natiijadan ka yaabisay Sir Alex waxay ka qosolsiisay oo la dhoolocadeynaya tababaraha kooxda Boorsooyinka lacagta la daala dhacaysa ee Man City Roberto Mancini isagoo ku amaanay ciyaartoydiisa guushan taariikhiga ah, isagoo ku tilmaamay guushan mid 25 dhibcood ay ka heleen 9 kulan ayna dhaliyeen 33 gool.
“Waxaan filayaa in kulan uu ahaa mid muhiim ah, waayo waxaan ku garaacnay iyaga (Man United) gurigooda Old Trafford laakiin ma fileyn 6-1” ayuu yiri Roberto Mancini.
“Laakiin waxaan filayaa inaan u baahanahay inaan taasi ka sii kobcino hadii aynu doonayno inaan hogaanka mudo dheer ku sii negaano” ayuu hadalkiisa ku darey Roberto Mancini.
Fletcher (Daqiiqadii 81-aad)
Goolasha Manchester City
Balottelii (Daqiiqadihii 22 & 60)
Aguero (Daqiiqadii 69-aad)
Dzeko (Daqiiqadii 90 & 90+3-aad
Silva Daqiiqadii 90-1
Garoonka lagu ciyaarayey ee Old Trafford waxaa soo xaadiray 75487 (Todobaatan & shan kun afar boqol sideetan iyo todob qof).
kkk good waan ku faraxsanaha guusha man city ay kagaartay man united